IZiko leNdwendwe lePaki yeNdawo yeHakaasan | Isiqithi seJeju | Ukuhamba ngeenyawo
I-2070-61, 1100-ro, Jeju-si, Jeju-do
INtaba yeHallasan inyuka ngokuzingca isembindini weJeju Island kwaye yeyona ndawo ibalulekileyo yesiqithi. Ibizwa ngokuba yiMt. IYeongjusan, okuthetha ukuthi “intaba iphakame ngokwaneleyo ukuba itsala lo mthala,” iNtaba yeHallasan yaziwa ngokubanzi zizazinzulu ngexabiso lazo lendalo. Yakhelwe ukuba ibe yipaki yelizwe e1970, kukho i-368 parasic volcanoes ebizwa ngokuba yiOreums (iziqwengana) ezijikeleze intaba ephambili.
INtaba yeHallasan idume ngokuma ngokuthe tyaba kwezityalo izityalo eziphuma kubushushu obahlukeneyo ecaleni kwelentaba. Ngaphezulu kwe-1,800 iintlobo zezityalo kunye ne-4,000 iintlobo zezilwanyana (3,300 iintlobo zezinambuzane) zichongiwe; Ukuphanda ubuncwane beentaba, landela nje enye yeendlela eziphuculweyo zokuhamba intaba.
INtaba yeHallasan kulula ukuyihamba. Ngeekhosi zokuhamba uhambo oluphantsi kwe-10 km ubude, kunokwenzeka ukuba uye kwi-peak kwaye ubuye ngemini enye. Nangona kunjalo, ukutshintsha kwemozulu eqhubekayo kuzisa umoya omninzi, ke qiniseka ukuba uzilungiselele kakuhle ngaphambi kokuba uqalise ukukhwela.